MR MRT: Chicken and Duck - ကြက်နှင့်ဘဲ
Chicken and Duck - ကြက်နှင့်ဘဲ
ဒါကတော့ ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ ဆရာသမား ဆရာတော် Ajahn Chah မကြာခဏ ပြောပြလေ့ရှိတဲ့ ပုံပြင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီဥတု သာယာတဲ့ နွေညနေခင်း တစ်ခုမှာပေါ့။ လက်ထပ်ပြီးစ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်ဟာ တောစပ်တစ်ခုမှာ လမ်းလျှောက်နေကြတယ်။ ကြင်စဦး ဇနီးမောင်နှံအတွက် ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အချိန်ပေါ့။ သူတို့ ကြည်ကြည်နူးနူး လမ်းလျောက်နေကြတုန်းမှာ "ကွက် ကွက်"ဆိုတဲ့ ငှက်အော်သံ ထွက်ပေါ်လာတယ်။
"ကို . . . နာထောင်စမ်း . . .။
"မဟုတ်ပါဘူးကွာ . . . ။
ကြက်မြည်သံပါ ကိုရယ် . . .။"
"မဖြစ်နိုင်တာကွာ . . .။
ကြက်ဆိုရင် အောက်အီအီးအွတ်လို့ တွန်မှာပေါ့။ ဒါက ဘဲ။"
အမျိုးသားဖြစ်သူက စိတ်မရှည်တော့တဲ့ပုံနဲ့ ခပ်ပြတ်ပြတ် ရှင်းပြတယ်။
"ကွက် ကွက်"မြည်သံ ထွက်လာပြန်တယ်။
"ကို . . . ။ မဟုတ်ဘူး။
အမျိုးသမီးလည်း စိတ်တိုလာတယ်။ ခြေဆောင့် ဖနောက်ပေါက်လိုက်တယ်။
"တော်တော်ခက်တဲ့ မိန်းမပဲ . . .။
ဘကုန်း . . . နောက်ထိုးပစ် . . . ဘဲ။
အမျိုးသား အော်လိုက်တာ အမျိုးသမီး လန့်သွားတယ်။ ဒါပေ့မယ် အမျိုးသမီးကလည်း မလျှော့ဘူး။
"ကြက် . . . အဲဒါကြက်။
ရှင် . . . ရှင်နော် . . .။"
ပြောရင်းဆိုရင်း "ကွက် ကွက်"သံ ပေါ်လာပြန်တယ်။ အမျိုးသမီးကတော့ ငိုလုလု ဖြစ်နေပြီ။
"ကြက်ပါ ဆိုနေတဲ့ ဟာကို . . ."
အမျိုးသမီး မျက်ရည်ဝဲနေတာကို အမျိုးသား သတိထားမိလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ သတိဝင်လာပြီး မျက်နှာထား ပြင်လိုက်တယ်။ ကြိုးစားပြုံးရင် အသိမ်မွေ့ ဆုံး လေသံနဲ့
"ကိုယ် မှားပါတယ်ကွာ . . .။
ဟုတ်ပါတယ် . . . ။
အဲဒါ ကြက်ပါ . . .။"
အမျိုးသမီးလည်း ပြုံးတစ်ဝက် မဲ့တစ်နဲ့ "ဟုတ်"ဆိုပြီး အမျိုးသားရဲ့လက်ကို ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်လိုက်တယ်။
သူတို့ ကြည်ကြည်နူးနူး လမ်းဆက်လျှောက်နေကြတုန်းမှာ "ကွက် ကွက်"မြည်သံ ထွက်လာပြန်တယ်။ ဇနီးမောင်နှံတို့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ပြုံးနေကြတယ်။
ဒီပုံပြင်ရဲ့ အဆုံးမှာ "ကြက်ဖြစ်ဖြစ် ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမှအရေးမကြီးဘူး"လို့ အမျိုးသားက သဘောပေါက်သွားတယ်။ သာယာတဲ့ နွေဦးညနေခင်းမှာ သူတို့နှစ်ယောက် အပေးအယူမျှပြီး ကြည်ကြည်နူးနူး လမ်းလျှောက်ရဖို့က အဓိကလို့ သဘောပေါက်လိုက်တယ်။
ကြက်-ဘဲ ငြင်းရင်း ရန်ဖြစ်ကြတဲ့ အတွဲတွေ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ အရေးမကြီးတဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေကြောင့် ကွဲခဲ့ရတဲ့ အိမ်ထောင်တွေ ဘယ်လောက်များပြီလဲ။ ဒီပုံပြင်ကို နားလည်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်တွေဟာ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀မှာ ဘာကို ဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာ သိကြပါလိမ့်မယ်။ ကြက်-ဘဲအရေးထက် အိမ်ထောင်ရေးက ပိုပြီးတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်မှန်တယ်လို့ အခိုင်အမာ ယူဆထားတာတွေ မှားနေတာကို နောက်မှ သိရတတ်ပါတယ်။ ဒီ ပုံပြင်ထဲက "ကွက် ကွက်"မြည်သံပဲ ဆိုပါစို့။ ဘာသံလဲ။ ကြက်သံလား ဘဲသံလား။ မျိုးဗီဇ ပြောင်းလဲဖန်တီးထားတဲ့ကြက်က ဘဲသံမြည်တာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
ချစ်သူချင်း တွဲကြတဲ့ နေရာမှာတင် မကပါဘူး။ နေရာတိုင်းမှာ အရေးမပါတာကို ငြင်းမနေကြဖို့ လိုပါတယ်။ အိမ်မှာ။ ကျောင်းမှာ။ အလုပ်မှာ။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ။ ရွာထဲမှာ။ မြို့ထဲမှာ။ နိုင်ငံထဲမှာ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ။
Ref: pp 31-32, Chicken and Duck, "Opening the Door of Your Heart and other Buddhist tales of Happiness"
Posted by Ashin Acara. at 8:07 PM